Dameen Oromiyaa Waldaa Qaamaa Miidhamtoota Biyyaalessaa Akka Cufame Himame - ዜና ከምንጩ
Waajjirri damee Oromiyaa waldaa qaamaa miidhamtoota biyyaalessaa biiroo dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaatiin akka cufame ibsameera
Waldichi Naannoo Oromiyaatti damee qabaachuun hojjechuu akka hindandeenye biiroon dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaa akka ibse pireezidaantiin waajjira damee Oromiyaa Takkaalliny Baay’isaa himaniiru.
Erga hundeeffamee waggoota 22 kan lakkoofsise waajjirri damee Oromiyaa waldaa qaamaa miidhamtoota biyyyaalessaa cufamuunsaa komii kaasiseera.Waajjira damee Oromiyaa magaalaa Jimmaatti argamu balbala cabsuudhaan waajjirichi qaama birootiif dabarfamee akka kenname hubatameera.
Biiroon dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaa xalayaa barreesseen waldichi waajjira dabarsee akka kennuuf kan gaafate yoo ta’u naannicha keessa socho’uufis hayyama fudhachuu kan qabu mootummaa Federaalaa irraa akka hintaane eerameera.Hojmaanni kun sirrii akka hintaane ibsuun kan morme waldichi labsii manni marii Federaalaa raggaasise haquudhaan biiroon nujalaa cufame jechuun Takkaalliny Addis Maaladaatti himaniiru.
Akkaataa labsii lakkoofsa 1113/11 waldaalee tola ooltoota Itiyoophiyaa hundeessuuf paarlaamaan Federaalaa raggaasiseen ejensiin waldaalee galmee Federaalaa Federaala taa’ee waldaalee guutuu Itiyoophiyaattti hundeeffamaniif danbii ittiin bulmaataa kennuufi chaappaa rukutuun hayyama akka argatan taasisuu danda’a.
Waldaan biyyaalessaa kana irratti bu’uraawuudhaan hundeeffame guutuu Itiyoophiyaatti caasaasaa diriirsee hojjechaa jira.Garuu jedhan Takkaalliny ‘Waajirri waldaa keenyaa waan nujalaa cufameef sochii hojii taasisuu dadhabuun dararamaa jirra’jechuun eeraniiru.
Ejenssichi hatattamaan waajjira akka bananiifi qabeenya waldichaa Jimmaatti saamame deebisiisuuf socho’aa jira.Kanaafis ammoo xalayaa waxabajjii 2 bara 2013 barreeffameen waldichi akka hundaa’e ejenssichi ibsuun waajirri akka banamuuf gaafatee ture jechuun Takkaalliny nutti himaniiru.
Gochi kun mirga heera mootummaa qaama miidhamtoota miliyoona sadii kan sarbedhas jedhan.Dhaabbanni abba garis akka miidhaman hubatee gaaffisaaniitiif deebii akka barbaaduuf gaafataniiru.
Waldichi irra jiraadhaan wiilcharii kennisiisuu,hojii kalaqaa qaamaa miidhamtootaa jajjabeessuu akkasumas iddoo hojii mijeesssuun hojiisaa akka ta’e nibeekama.
Oromiyaatti qaamaa miidhamtoota deeggaruuf labsiin ba’e boqonnaan 31,biiroon dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaa qaamaa miidhamtootaaf deeggarsa kennuu akka qabu eera,
‘Kana gochuu utuu qabuu karoora waldichaa biiroo wajjin hojjechuu qabdu jechuun hanga waajjira cufsiisuu ga’ameera.Waajjira biraa bannee akka hinhojjenneef daandiin kan cufame yoo ta’u waajjira damee Dheeraa jiruun abbootii dhimmaa keessummeessaa jirra’jechuun Takkaalliny dubbataniiru.
Caasaan mootummaa Federaalaa hojmaata naannichaa irratti wanti isa galchu hinjiru jechuun waldichi naannoo irratti akka hinhojjenne taasifamuu Takkaalliny ibsaniiru.
Labsichi kan hayyamee jiruufi labsiin waldicha naannicha keessaa ariisisu akka hin jirre utuu beekamuu yeroo mana murtee deemnuttis seeraan ala akka hintaane nuuf mirkaneessanii waliigaluu akka qabnu qofa nuuf ibsaa jiru jechuun Takkaalliny hubachiisaniiru.Waldichi naannolee gara garaa keessatti hojjechaa kan jiru yoo ta’u Oromiyaa keessa qofatti akka dhorkame nibeekama.
Biiroon dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaa akka ibsetti hayyama Federaala irraa fudhatan deebisuudhaan akka haarawaatti akka gurmaa’aniif yoo gaafatamanis labsiin lammata akka gurmoofnuuf ajaju akka hinjirre Takkaalliny ibsaniiru.
Kana malees hayyama naannichaatin kan hojjetan yoo ta’e hayyamni Addis Ababaa irratti konkolaataa ashuuraa guumruukaa irraa bilisa ta’e galchuufi wiilcharii kaffaltii malee fichisiisuuf nundandeessisu jechuun yaaddoo qaban Takkaalliny eeraniiru.
Addis Maaldaan yaadasaanii itti ida’uuf biiroo dhimma hojjetaafi hawaasummaa Oromiyaatiif irra deddeebiidhaan bilbiltus deebii argachuu hindandeenye.
Total views : 7505358